Etu esi agbalite ogo ọchụchọ site na ingchọta, Nlekota, na idegharị 404 Njehie Na WordPress | Martech Zone
Anyị na-enyere onye ahịa azụmaahịa aka ugbu a na itinye saịtị WordPress ọhụrụ. Ha bụ ọtụtụ ọnọdụ, otutu asụsụ azụmahịa ma nwee ụfọdụ nsonaazụ na-adịghị mma n'ihe metụtara ọchụchọ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Mgbe anyị na-akwado saịtị ọhụrụ ha, anyị chọpụtara okwu ole na ole:
Archives - ha nwere ọtụtụ saịtị n'ime afọ iri gara aga ya na odi iche putara ihe na saiti URL ha. Mgbe anyị nwalere njikọ peeji nke ochie, ha 404'd na saịtị ha kachasị ọhụrụ.
backlinks - mgbe anyi mere nyocha backlink Semrush,
Translation - ọtụtụ n’ime ndị na-ege ha ntị bụ ndị Hispanic, mana saịtị ha tụkwasịrị obi naanị na bọtịnụ ịsụgharị kama itinye ya na peeji nke saịtị ahụ.
Ebe ikpeazụ ha bụ nwere Site SEO gị n'ụlọnga ha na-arụ ọrụ maka… m na uche a nnọọ shady omume na ihu ọma esetịpụ ahịa nwe njigide. Yabụ, ịga n'ihu, anyị ga - ewepụta saịtị ọhụrụ site na ncha ma bulie ya… nnukwu ego maka ndị ahịa.
Akụkụ dị oke mkpa nke usoro ọhụụ bụ iji uru atọ ndị ahụ dị n'elu. Anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị na-etinye rediregharị na ibe niile na-efu (njehie 3) NA anyị nwere ike ịba uru na ndị ọrụ ọchụchọ ha nwere ọtụtụ asụsụ site na ịgbakwunye peeji ndị atụgharịrị. N’isiokwu a, aga m elekwasị anya na 404 nsogbu njehie - n'ihi na ọ na-ewute ha search engine rankings.
Ihe kpatara njehie 404 ji dị njọ maka ọkwa SEO
Iji mee ka nkọwa dị mfe maka ndị ahịa na azụmahịa, ana m eme ka ha mara na engines ọchụchọ index otu peeji ma hazie ya na mkpụrụokwu dị mkpa site na ọdịnaya dị na ibe ahụ. Agbanyeghị, ha n'usoro peeji nke dabere na ewu ewu ya - nke a sụgharịrị na backlinks na saịtị ndị ọzọ.
Yabụ… chee na ị nwere ibe na saịtị gị site na afọ ndị gara aga nke nwere ọfụma ma jikọta ya site n'ọtụtụ ebe. Wee wuo saịtị ọhụrụ ebe ibe ahụ gafere. Nsonaazụ bụ na mgbe engines ọchụchọ na-awagharị na backlinks… ma ọ bụ onye ọrụ na saịtị ọzọ pịa njikọ… ọ na-ebute njehie 404 na saịtị gị.
Ouch. Nke ahụ dị njọ maka ahụmịhe onye ọrụ na ihe ọjọọ maka ahụmịhe ndị ọrụ njikwa search engine. Nsonaazụ, igwe nyocha ahụ na-eleghara backlink… nke n'ikpeazụ tụlee ikike na ogo saịtị gị.
Ozi ọma ahụ bụ na backlinks na saịtị nwere ikike anaghị agwụ agwụ! Dika anyi wuru saiti ohuru maka ndi ahia ma ghazigharia ihe ochie na ihe ohuru… anyi lere ihu akwukwo a na elu elu peeji ihe nchoputa njin ọchụchọ (SERP).
Ọ bụrụ na ịnwe ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ gị (yana KWES websiteR website designlọ ọrụ webụsaịtị ọ bụla kwesịrị ịbụ) ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwere onye ndụmọdụ SEO nke arụghị ọrụ a, ekwenyere m na ha na-eleghara ọrụ ha anya n'ezie. Nchọgharị ọchụchọ na-anọgide na-abụ isi mmalite okporo ụzọ maka atụmanya ndị dị mkpa na ebumnuche ịzụta.
Ya mere, na na… ma ọ bụrụ na ị na-redesigning gị na saịtị, hụ na ị na-na-eme na auditing na redirecting gị okporo ụzọ ọhụrụ peeji nke ọma. Ma, ọ bụrụ na ị naghị agbanwegharị saịtị gị, ị ka ga-enyocha peeji 404 gị ma weghagharịa ha nke ọma!
IHE: Ọ bụrụ na ịgaghị ịkwaga na saịtị ọhụrụ, ịnwere ike ịwụli ozugbo na Stepkwụ na 5kwụ 404 na usoro a iji nyochaa na redirect peeji XNUMX.
1kwụ na Prekwụ XNUMX: Nga-ẹkedori Audit nke Ugbu A n'Sitentanet
Download Ngwaahịa niile dị ugbu a - Ana m eme nke a site na iji oke OSX ngwa akpọrọ SiteSucker.
Nweta ndepụta URL niile nke ugbu a - M na-eme nke a na Frog Fream.
Nweta ndepụta niile nke backlinks - iji Semrush.
Ugbu a, enwere m akụ na ibe ọ bụla na saịtị ha ugbu a. Nke a ga - enyere m aka ịkọwapụta nke ọ bụla n'ime akụ ndị ahụ n'ụzọ ọhụụ na saịtị ọhụrụ ahụ (ma ọ bụrụ na achigharị ha).
Kwụ na Plankwụ 2: Nga-ẹkedori Plan The n'usoro n'usoro, slugs, na peeji nke
Nzọụkwụ ọzọ bụ inyocha ọdịnaya ha ma chọpụta otu anyị nwere ike isi dị mfe ma wuo ya Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke ahụ ahaziri nke ọma ma hazie na saịtị ọhụrụ ahụ. Imirikiti oge, m na-ewu peeji efu na ederede WordPress ka m wee nwee nyocha maka mmecha mechara maka ndị edemede na ndị nrụpụta m ịrụ ọrụ.
Enwere m ike inyocha URL na akụ ochie dị ugbu a iji mejupụta ibe akwụkwọ ahụ ka ọ dịrị mfe iji hụ na m nwere ọdịnaya niile dị mkpa ma ọ nweghị ihe na-efu na saịtị ọhụrụ ahụ dị na saịtị ochie.
Nzọụkwụ 3: Mwepụta Mbido nke URL ochie na URL ọhụrụ
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ime ka usoro URL dị mfe ma gbalịa idobe ibe na biputere slugs dị nkenke ma dị mfe, anyị na-eme. Achọpụtala m ọtụtụ afọ na mgbe redirects na-eche ida ụfọdụ ikike… njikarịcha nke ha draịva mụbara njikọ aka, nke sụgharịrị ka mma ogo. Jọ anaghịzi atụ m redirect peeji nke dị elu gaa na URL ọhụrụ mgbe ọ nwere ezi uche. Mee nke a na mpempe akwụkwọ!
Kwụpụ 4: Bido Mbubata Ntugharị Bubata
N'iji mpempe akwụkwọ na Nzọụkwụ 3, m mepụtara tebụl dị mfe nke URL dị (na-enweghị ngalaba) na URL ọhụrụ (yana ngalaba). M mbubata ndị a redirects na Ọnọdụ Math SEO ngwa mgbakwunye tupu ịmalite saịtị ọhụrụ. Ọkara Math bụ kacha mma WordPress ngwa mgbakwunye maka SEO, n'uche m. Akụkụ akụkụ process usoro a nwere ike (na ekwesịrị ịme ya) ọbụlagodi ịme ma ọ bụrụ na-agagharị saịtị na ngalaba ọhụrụ.
Kwụpụ 5: Mwepụta ma nyochaa 404s
Ọ bụrụ n’ịmechara ihe niile ugbu a, ị ga - enweta saịtị ọhụrụ ahụ, ihe ntụgharị niile ahụ, ọdịnaya niile dị na ya, ị dịkwala njikere ịmalite. Ọrụ gị agwụbeghị… ị ga-enyocha saịtị ọhụrụ ahụ iji chọpụta peeji 404 ọ bụla na-eji ngwaọrụ abụọ dị iche iche:
Njikwa Nchọta Google - ozugbo ewepụtara saịtị ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-achọ ịnyefe saịtị XML ma lelee otu ụbọchị ma ọ bụ karịa iji hụ ma enwere nsogbu ọ bụla na saịtị ọhụrụ ahụ.
Ọnọdụ Math SEO ngwa mgbakwunye 404 Nyochaa - Nke a bụ ngwá ọrụ ị kwesịrị ị na-eji mgbe… ọ bụghị naanị mgbe ị na-launching saịtị. Kwesịrị ịkwado ya na Dashboard Rank Math.
Dịka ọmụmaatụ, anyị bidoro saịtị maka ọtụtụ ebe Dentist bụ ọkachamara na ụmụaka nwere Medicaid mkpuchi. Otu n'ime peeji ndị anyị matara nke nwere backlinks na-ekpuchighi bụ isiokwu, Ezé 101. Saịtị dị adị enweghị isiokwu ahụ. Ngwaọrụ Wayback nwere naanị ihe edemede. Ya mere, mgbe anyị malitere saịtị ọhụrụ ahụ, anyị jidere n'aka na anyị nwere isiokwu zuru ezu, ozi infographic, na ihe osise na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na URL ochie gaa na nke ọhụrụ.
Ozugbo anyị malitere saịtị ahụ, anyị hụrụ na okporo ụzọ ntụgharị na-agazi na ibe ọhụrụ ahụ site na URL ndị ochie ahụ! Peeji ahụ bidoro bulie ụfọdụ ọmarịcha okporo ụzọ yana ogo ya. Anyị emebeghị.
Mgbe anyị nyochara nyocha 404, anyị hụrụ ọtụtụ URLs nwere "ezé nwa" na-agbadata na peeji 404. Anyị gbakwunyere ọtụtụ ụzọ ziri ezi nke redirect na ibe ọhụrụ. Akụkụ akụkụ… anyị nwere ike ahu nagide a nkwupụta mgbe niile iji jide URL niile mana anyị na-akpachara anya ịmalite.
Nseta ihuenyo ahụ dị n'elu bụ n'ezie Rank Math Pro nke na-agụnye ike ịkọwapụta redire gị… a mma mma. Anyị na-eso Rank Math Pro n'ihi na ọ na-akwado ọtụtụ ọnọdụ.
Ugbu a, peeji ahụ bụ peeji nke # 8 kachasị ahịa na saịtị ọhụrụ n'ime otu izu nke ịmalite. Ma enwere peeji 404 n'ebe ahụ ruo ọtụtụ afọ mgbe ọ bụla onye ọ bụla bịara! Ọ bụ nnukwu ohere tụfuru nke a na-agaghị achọta ma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya banyere ịgbagharị na nyochaa njikọ ochie nke dị na webụsaịtị ha.
Rank Math nwekwara ihe ederede zuru ezu banyere idozi njehie 404 nke m ga-agba gị ume ịgụ.
Nchịkọta oge: Otu esi edozi njehie 404
Tags: 404Njehie 404nyochairi ari saịtịgoogle search njikwabubata rediregharịurl mapnhazi ọkwaỌkwa ná mgbakọ na mwepụ ngwa mgbakwunyeokwa ná mgbakọ na mwepu seon'usoro math seo ngwa mgbakwunyeogona-atụgharịiti mkpuọchụchọ ogosemrushAseo ogoagwoọkpọ ọkpọsaịtịuckerWordPress